OPDO maal qorachaa jirti? – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooOPDO maal qorachaa jirti?
OPDO maal qorachaa jirti?
Kumsa Burayu, PhD, Bitootessa 16, 2020
Free all Oromo political prisoners, including Unisound Professor Beyene Ruda, Jaal Yaasoo and thousands more
Sababiin hidhamuu Hoggantoota ABO inni dhugaan diraamaa Buraayyutti raawwatame sana osoo hintaane qormaata siyaasaa dhokataa OPDn geggeessaa jirtudha. Yakki Buraayyutti geggeefame sun shira OPDOn qormaata ofii ittiin milkeeffachuuf saganteeffattedha. Warri qawwee ofii lafa kaahanii qabsoo karaa nagaaf biyyatti galan sababa yakka bifa sana raawwataniif hinqaban.
Dhugaan jiru, OPDOn Hooggantoota ABOn hidhuudhaan dandeettii ofii, dandeettii dhaaboota mormitootaa, jabina siyaasaa saba oromoo fi ijaarsaa isaa irratti qormaata gad fagoo ta’e geggeessuu barbaaddi
OPDOn ummmata Oromoo irra amantii waan hinqabneef yoggu shakkiidhaan jiraatti. Gartuun kun saba qofa irratti osoo hintaane matuma ofii irrattuu amantii hinqabdu. OPDOn sodaan dhalattee , sodaan guddatee sodaan dulloomaa jirti. Mootummaa taatee ille sodaan fi shakkii kana irraa bayyanachuu hindandeenye. Sodaan kun dhukkuba hamaa akka isheen gara of-irrummaatti cillaaqfattuuf dirqa jiru. Of-irrummaa shaakaluuf ammoo xiqqaatu dursitee kanneen armaan gaditti tarrifaman hangs tokko qorattee ilaaluu qabdi:
1- Waan hundumaa dura Dandeettii ABOn akka jaarmaatti qabu – ijaarsa isaa fi sagalee tokkoon miseensotaa fi deggertoota isaa bobbaasuu ji danda’aa fi hindanda’uu isaa adda baafattee baruu qabdi. Yoo ABOn waamicha tokkichaan saba isaa raaaee hirrisuuf dandeettii jaarmaa kan qabu ta’e cillaaqfannaa gara Abbaa – Irrummaatti gootu turfattee tattaaffii diplomaasiin dhaabicha waliin hojjechuuf of qopheessuu qabdi.Yoo dhaabichi miseensotaa fi deggertoota isaa atattamaan hiriirsee rorroo of irraa qolachuuf dandeettii jaarmaa gahaa hinqabu ta’e ammoo hiraaristee gabaa siyaasaa keessaa baasuuf saganteeffatti. Kanaafuu, hidhaan hooggantoota ABO qormaata dandeettii jaarmaa isaa irratti OPDOn geggeessaa jirtu ta’uun sirriitti beekamuu qaba. Hanguma dhaabichaa hiitee, deebii sirnaa kan gochaa ishee gitu dhabaa deemtu, dhaabicha moggaasaa fi xiqqeessaa deemti. Of-irruummaan kan inni lalisu humna isa gitu yommuu dhabu qofa. Humna OPDO kana gituuf dhaabichi jaarmaa hawaasicha hundeen sochoosuu danda’uu fi kan karaa nagaa mootummicha siysaasaan, dinagdee fi hawaasummaan naaffisuu danda’u horachuun dirqama ta’a.
2- OPDOn Dandeettii fi fedhii dhaabonni Oromoo keessattuu KFO fi PBOn dirmokraasii dhugaa fi wal deggersa irratti qaban sirriiti qorachuu barbaaddii. Hooggantoota ABO hidhuun fedhuu OPDOn gara Of-irrummaa deemuuf qabdi ta’uu isaa beekanii dhaabonni kun lamaan gochaa kana ni balaaleffatu moo ni dhiisu kan jedhu addaan baafachuu barbaaddi. Dhaabonni kun lameen balaa ABO qunnaa jiruuf kaadhimamoo ta’uu isaanii osoo beekanii har’uma buluuf jecha afaan qadaaddachuun isaanii qormaata OPDOn isaaniif laachuu eegalte kufuu isaanii agarsiisa. Dhaabnii saden (ABO, KFO fi PBO) “Wal taanee dantaa saba keenyaa eegsifna, Oromiyaa ijaarranna” jechuun saba keenyaatti hiyyaa turuun isaanii dhugaa ykn ammoo soba ta’uu mirkaneeffachuu barbaaddi. Yoo har’a yeroo OPDOn ABOtti rorriftu KFO fi PBOn callisuu filatan, yoo miseensotaa fi deggertoota isaanii dimokraasii haqaaf hiriirsuu hindanda’in, yoo har’a dhibantaa dhugaa waliif hinta’iin boru yommu isheen dabaree isaanii hiitu, ABOnis ta”e dhaabonni biroo. deebii wal fakkataa akka laatan waan beektuuf OPDOn “gargar baasanii dha’uu” toftaa jedhutti fayyadamaa jirti. Kanis qormaataa mataa isaa danda’e kan OPDOn hoofaa jirtudha.
3 – Aktivistoonnii fi warri Falmitoota Mirga Dhala Namaa ofiin jedhanis hidhamuun Hooggantoota ABO tiin haalaan qoratamaa jiru. Mirgi siyaasaa fi namoomaa kan miseensotaa ABO guyyuu sarbamaa oolu iyyuu, sagalewn Aktivistoonni kaleessa gurra nu cufaa bahanii har’a Antuuta dhoqqee seente ta’uun isaa duraanuu mirga saba keenyaaf osoo hintaane dantaa bubuutu harrabachuuf kan gadoodaa turan ta’uu isaanii OPDOn akka gaariitti adda baafate. Kaleessa nageenya mataa isaaniif jecha namoota heddu warri wareegsisan har’a obbolaan isaanii warri qabsoo dhugaa irratti bara jireenya isaanii guutmaa dabarsan yommuu OPDOn mana hidhaatti keessattu hiraarfamaa jiran callisuun isaanii eenyu akka isaanii ta’anii fi tokkummaa qabsoo saba irratti laafina isaanii qaban OPDOn adda baafatte. Dadhabina kanattis dhimma baatee qabsoo saba keenyaa mancaasuuf marxifattee kaate.
4 – OPDOn dandeetti fi qophaa’ina sabni keenya mirga isaa gonfachuuf qabu manzaraa qormaata isheetiin gamaaggamaa jiraachuun ishees ifaadha.Ummatni Oromoo waan barbaaduu argachuuf, dhaaba jaallatu tikifachuuf, mootummaa bilisa ijaarrachuuf, Bilisummaa isaaf wareegama barbaachisu baasuuf qopha’ina inni qabu qoraachuuf jecha OPDOn Hooggantoota ABO hidhaatti guuraa jirti. Qabsoon ABO qabsoo saba, qabsoo haqaa, qabsoo mirgaa ta’uu isaa OPDOn akka gaariitti beekti. ABOn ummata Oromoo biratti jaallatamaa ta’uu isaa irraas shakkiti hinqabdu. Haata’u malee, Kan isheen adda baafachuu barbaaddu dandeetti, murannoo fi qophaa’ina siyaasaa ummatni Oromoo dhaabaa akka qaroo ija isaatti jaallatu kana tikifachuuf qabu akka gaariitti secca’uuf qormaata kana gochaa jirti.
5 – Waan hundaa caalaa ammoo OPDOn Hooggantoota ABO kan isheen hiraarsituuf jabinaa fi tokkummaa Qeerroo fi Qarree krenyaa irratti qormaata cimaa adeemsisuudhaaf. ABOn sanyii Qeerroon irraa dhalate, gaaddisa siyaasaan fincila Qeerro jalatti oomishame, hundee Qeerroo Ganamaa ta’uu isaa OPDOn akka gaariitti beekti. Humni warraaqaan kun Abbaan siyaasaa isaa (ABOn) yommuu hiraarfamuu ta’ee ilaala moo ni fincila gaaffii jedhu deebisuuf OPDOn Hooggantoota ABO hiitee qormaata dhaloota kana irratti deemsisaa jirti. Kana malees, Qeerrooo keessaa %tti hark’a meeqatu akka dantaadhaan of jalatti qabattee jirtu gamaaggamuu barbaaddi. Fincilli gara Angootti isheen fide sun du’eera moo jiraa kan jedhus adda baafachuuf yaalaa jirti. Qeerroon dhugumaan galii qaba moo fayyuma fincile gaaffi jedhus sirriitti hubachuu feeti. Qeerroon dhuguma Oromummaan ijaarame moo gandaa fi amantiidhaan walitti suphame isa jedhu sanas qirqiddee adda baafachuu barbaaddi.
Dimishaashumatti, Hooggantoota fi miseensota ABOn karaa nagaan qabsa’uuf biyya ofitti galan kan OPDOn hidhaatti guuraa jirtuuf dhugumaan yakka raawwataniinan osoo hintaane dandeetti jaarmaa ABO, jabina KFO fi PBOn ijaarsa dimokraasii haqaa irratti qaban, ejjennoo Aktivistoota keenyaa, qophaa’ina saba fi bishinaa ijaarsa Qeerroo fi Qarree keenyaa qorachuuf tarkaanfii isheen fudhataa jirtudha. ABOn dhaaba isheen irratti hegeree Of-irrummaa ishee qorachaa jirtudha. ABO karaa irraa yoo maqsite, Of-irroo taatee Oromiyaa bulchuuf gufuu isaa guddaa akka of jalaa kaafteetti waan ilaaltuuf human qabduu fi hinqabneen duula ishee achi irraa eegaluun ishee qaama qormaata isheen gochaa jirtuuti.
Qormaata kana keesaatti ABOn jaarmaan jabaa yoo ta’e, ummatni keenyaa dammaqaa fi qophaawaa yoo ta’e, Dhaabonni Oromoo dantaa bubuutuu osoo hintaane Sirna dimokraasii haqaa fiduuf yoo kan dhugaan wal tumsan ta’e, addatti ammoo Qeerroon keenya Bilisummaa fi Dimokraasiif fincila isaa yoo deebisee kan qabsisu ta’e; abjuun OPDOn Of- irrummaan saba keenyaa bituuf abju’ataa jirtu kun qilleensa irratti hafa.
Raya Abadura Abagaro: Waayee OPDO maal jedha. Via Oromiyaa Harmeekoo, Ebla 24, 2019 Wolgahiin ODP…
Abiy Understands neither Synergy nor Prosperity Dictum